Nagarik News - पूर्वकी मोनालिसा
काठमाडौं- यो तस्बिर सर्बता गुलको हो। पाकिस्तानको अफगान सीमाछेउ बसेको भिडभाडयुक्त शरणार्थी शिविरमा आकर्षक आँखाकी धनी सर्बताको तस्बिर खिच्न तयार हुँदा स्टिभ म्याक्करीसँग सर्बता निकै रिसाएकी थिइन्। तस्बिर धुलाइसकेपछि स्टिभले तत्काल नेसनल जियोग्राफिकका सम्पादकलाई देखाए। सम्पादकले लगभग 'यूरेका' शैलीमा भने, 'अर्को अंकको कभर फेला पर्यो!'
त्यसपछि ती 'अफगान युवती' पत्रिकाको आवरण मात्र बनिनन्। स्टिभलाई उनको नाउँ थाहा थिएन, त्यै भएर पत्रिकाको कभरमा 'अफगान युवती' भनेर लेखियो। पत्रिकाको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा सफल कभर र बढी बिक्री भएकोसमेत बन्यो।
सर्बता त्यो बेला १२ वर्षकी थिइन्। अफगानी आदिवासी पस्तुन जातिकी सर्बताले सोभियत–अफगान–सिआइए युद्धमा आमा–बा गुमाएकी थिइन्। टुहुरी सर्बता अफगान–पाकिस्तान सीमा क्षेत्रको नासिर बाग शरणार्थी क्याम्पमा रहँदा १९८४ को डिसेम्बरमा यो तस्बिर खिचिएको थियो।
तस्बिर खिचेको १७ वर्षसम्म पनि स्टिभलाई उनको नाउँ थाहा थिएन। उनी भविष्यमा कस्तो देखिएलिन् भनेर नेसनल जियोग्राफिकले अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर बूढी सर्बताको मूर्तिसमेत बनाएको थियो। सन् १९९० को दशकभरि स्टिभले पाकिस्तानका विभिन्न शरणार्थी शिविरमा खोजिहिँडे पनि भेट्टाउन सकेनन्।
२००२ मा स्टिभले अफगानिस्तानमा सर्बतालाई भेट्दा विवाहिता मात्र होइन, चार सन्तानकी आमा भएको पाए।
स्टिभलाई जीवनमा कहिल्यै लागेको थिएन, एउटा तस्बिरले उनको पूरै फोटोग्राफी जीवन बदल्ने छ। आफूले ४० वर्षे दौरानमा खिचेका तस्बिरलाई संसारभर प्रदर्शन गरिरहेका छन् र जहाँ पनि वाहवाही बटुलिरहेका छन्।
तस्बिरको शक्ति कति हुन्छ भने यही तस्बिर हेरेर धेरै सर्वसाधारणले शरणार्थी शिविरमा सेवा गर्ने चाहना व्यक्त गरे। यही तस्बिरका कारण नेसनल जियोग्राफिकले अफगान चिल्ड्रेन्स फन्ड बनायो ताकि अफगान टुहुराहरूलाई केही गर्न सकियोस्।
'जीवनमा जे कुरालाई तपाईं प्रेम गर्नुहुन्छ, पछ्याउँदै जाँदा एक समय तपाईंले जीवनभर लगाएको पुँजी अद्भूत सम्पत्तिमा बद्लिँदो रहेछ,' उनले ४० वर्षसम्म खिचेका तस्बिरतर्फ हेर्दै भने।
अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा जन्मिएका स्टिभ त्यहीँको स्टेट युनिभर्सिटीमा थिएटर आर्ट पढेका थिए तर फोटोग्राफीमा जमे।
सन् १९७० को दशकमा भारत आएर फ्रिलान्स फोटोग्राफीसमेत गरे। सोभियत सेना अफगानिस्तान छिरेकै बेला उनले पूरा अफगानिस्तान चहारे। उनका तस्बिर हातहातै बिक्री भए। त्यहाँ रहँदा उनले पाएका अनेकौं सास्तीका कथा यतिबेला सपनाझैँ लाग्छ। कति पटक त उनका क्यामेरा चोरिए, पैसा लुटिए। सुतिरहेका बेला 'कुइरे'बाट केही पाइएला भनेर होटलका कोठामा राति नै अपहरण गर्न खोजे।
कयौं पटक युद्धग्रस्त क्षेत्रमा डुलिहिँड्नु कुनै यातनाशिविरमा घुस्नुजत्तिकै उनलाई नलागेको होइन। आफू नै कतिबेला मारिने हुँ भन्ने डरले पनि नथिचेको होइन। तर युद्ध र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा तिनका बारेमा विश्वलाई सुनाउनुपर्ने अनेकन कथा भएको महसुस गर्दै डरलाई मिचेर फोटो खिचिरहे।
राम्रो तस्बिर कसरी खिचिन्छ? उनको अनुभवले भन्छ, 'जबसम्म तपाईं तस्बिर खिचिनेसँग घुलमिल हुनुहुन्न, तिनले तपाईंलाई पर्याप्त विश्वास गर्नुहुन्न, त्यतिञ्जेल राम्रो तस्बिर खिच्न सक्नुहुन्न।'
उनी भन्छन्, 'राम्रो तस्बिर र अन्य तस्बिरको फरक के हो भने राम्रोको मूल्य कहिल्यै हराउँदैन। ती सदा स्मरणीय रहन्छन्। ती तस्बिर हेर्नेबित्तिकै तपाईंले एकै पटक त्यसको सशक्त सांस्कृतिक क्यानभास बुझिहाल्नु हुन्छ।'
सर्बताको यो तस्बिर १९८५ मा प्रकाशित भएयता उनी संसारभर प्रख्यात भइन्। उनलाई अफगानी र पाकिस्तानीहरू 'पूर्वकी मोनालिसा' भन्ने गर्छन्। उनको यो तस्बिर लिइँदाको क्षण सर्बताले अझै बिर्सिएकी छैनन्। एउटा फोटोग्राफरले उनीतिर क्यामेरा तेर्स्या एको थियो। उनलाई त्यो देखेर झनक्क रिस उठेको थियो। पस्तुनी समाजमा नचिनेको व्यक्तिले यस्तो दखल दिएको राम्रो मानिदैन। त्यसो त उनको तस्बिर यसअघि कहिल्यै लिइएको पनि थिएन।
स्टिभले यसको १७ वर्षपछि सर्बतालाई पुनः भेटे र अर्को तस्बिर खिचे। त्यतिञ्जेल उनको बिहे भइसकेको थियो, केही सन्तान जन्मिसकेका थिए। त्यो बेला स्टिभले सर्बताको परिवारकै तस्बिर खिचे र त्यो सर्बताको अन्तिम तस्बिर थियो।
स्टिभ आफ्नी 'मोनालिसा'को तस्बिर लिँदाको क्षण अझै बिर्सेका छैनन्। स्टिभ भन्छन्, 'शरणार्थी शिविरमा म बिहानै पुगेको थिएँ। शिविरको टेन्टभित्र चलाइएको स्कुल छेउमा बसिरहेकी लजालु बालिकालाई उनले सोधे, 'म तिम्रो तस्बिर खिचौँ?' सर्बताले कुनै जवाफ दिइनन्। स्टिभले धडाधड केही पटक खिचिक खिचिक पारिहाले।
'ती नानीको तस्बिर खिच्नु र अरुको तस्बिर खिच्नुमा मेरा लागि त्यो दिन विशेष फरक केही थिएन,' उनले सम्झँदै भने। तर १९८५ को जुन महिनाको नेसनल जियोग्राफिकको आवरणमा निस्कँदा तत्कालै संसारभर हल्लीखल्ली मच्चियो।
बिहेपछि सर्बता अफगानिस्तानको पहाडी क्षेत्र तोरा बोरा फर्किइन्। नेसनल जियोग्राफिकको टोली उनलाई खोज्दै त्यहीँ गयो। पछि स्टिभले उनकी 'मोनालिसा'लाई सम्झँदै भनेका छन्, 'उनको अनुहारमा केही परिवर्तन देखेँ र सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन चाहिँ त्यहाँको जीवनको जुन कठिनाइ छ, त्यसले उनका सबै आकर्षण निलेको रहेछ।'
सर्बताका पति रहमत गुल १६ वर्षकी सर्बतालाई भिœयाउँदाबाहेक सर्बताको अनुहारमा कहिल्यै मुस्कान न उघ्रेको बताउँछन्। अहिले सर्बतालाई दमको रोग छ। रहमतले कमाएको अधिकांश रकम उनको उपचारको लागि खर्च हुने गर्छ।
सर्बतले पढ्न थालेको केही समयमै पर्दाभित्र बस्नु पर्योए र पढ्ने क्रम टुट्यो। उनका दुई छोरी र एक छोरालाई भने पढाउने मन छ भनेर स्टिभले बताएकी थिइन्। स्टिभले भने, 'मैले जब अफगानिस्तानलाई सर्बतालाई भेटेँ, उनका आँखा र अनुहारमा आफ्नो बाल्यकालको तस्बिर देखेर कुनै खुसी थिएन।' स्टिभले यो निराशा अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन्।